5 Izindlela Sure Ukusindisa Big On Insurance Your
Abantu abaningi kanye nemindeni ezizimele Bayadiyazela ngaphansi isisindo yomshuwalense various inqubomgomo izinhlelo, futhi lokhu sore ezithinta imali eyiphinda umndeni wabo namazinga okuphila. Bathi bayayivisisa ukubaluleka ukukhokha amaphrimiyamu zabo stoutly futhi empeleni wenze kanjalo, kodwa imiphumela yabo imali yabo jikelele kanye namazinga wokuphila omkhaya elahlekile kuzo - ngakho kudingeka ukuba ayohlola izindlela ukusindisa elikhulu imishuwalense yabo ngaphandle kokuyekethisa izinga izinhlelo ezikhona. Cabanga ukukhokhela umshuwalense wezempilo womndeni, yomshuwalense ekhaya and impahla, umshuwalense auto car, nokuphila yomshuwalense phakathi kwabanye, lokho bangahlala ukuba banakekele umndeni futhi baxazulule amaphupho siqu kanye nezinhloso? Impendulo yalo mbuzo kugcizelela izizathu zokuthi kungani kumelwe ugcine big yomshuwalense, futhi lokhu okulandelayo kanjani:
i. Phakamisa nokufakelwa yakho: Uyazi ukuthi kusho ukukhulisa noma ukwandisa imali yakho, awu? Lokhu kusho ukuthi ukwandisa inani out-of-ephaketheni uyifingqa ukhokha ngezimo ngephutha ezigunyaza umshuwalense isinxephezelo ukungenelela. Lapho uphakamisa nokufakelwa yakho, Izinkampani zomshuwalense ukukubona njengoba ekunciphiseni izigameko isinxephezelo izicelo phezu kwabo futhi ngokuzenzekelayo sinciphise premium yakho ukuze rates ezingabizi kakhulu - ukukuvumela ugcine big on izinhlelo ukuthi awukwazi ukwenza ngaphandle futhi sasingeke sibe yimpumelelo ngaphandle nokufakelwa ephakanyiswe.
ii. Khuluma ejenti yakho phezu izaphulelo: Khuluma umshwalense wakho agent ukuhlaziya inqubomgomo yomshuwalense yakho futhi izinhlelo ubone indlela kokufanelekela amanani kwi-premium yakho. Abantu abaningi bafanelekele izaphulelo umshwalense bengazi, futhi niqhubeke ukukhokha rates okusezingeni ngoba izinkampani zomshuwalense yabo kungaba owokugcina bezitshela ngaphandle zilondoloza ubuhlobo obuhle agents zabo. Agents Your kufanele baxazulule izaphulelo yakho futhi kukusize ukuba ugcine big okusekelwe ezicini ukuthi umusa inqubomgomo yakho kanye nenani inqubomgomo izinhlelo onazo nenkampani yomshuwalense.
iii. Phakamisa credit yakho score: Izinkampani zemishuwalense cabanga you engozini enkulu ukuze umshwalense obonelela uma une nomlando omubi wokukweleta. What ungase abangayazi ukuthi amafemu yomshuwalense enze amasheke isizinda ubone indlela credit yakho ezikhombisa noma izilinganiso kukhona. Uma credit yakho ezikhombisa liphansi kakhulu ke igxeke a high premium rate uma umshwalense obonelela wena, kodwa uma usebenza kanzima ukulungisa ukukhulisa credit yakho izilinganiso ke banciphisa premium yakho rates. Nangabe uke paying rates eziphakeme kakhulu ngenxa credit izikolo zakho ezimbi ngaphambi ekulungiseni kwabo, ke kumelwe ubazise izinguquko ezenziwe ukuze zikwazi ukusebenza kungancipha premium rates yakho ngokushesha.
iv. Sebenzisa enkampanini efanayo: Lokhu kwenza ingqondo: sebenzisa efanayo yomshuwalense ngokuqinile noma inkampani umshwalense obonelela bonke umndeni wakho, impahla, impilo kanye nezinye izinto. Noma kunalokho, umshwalense obonelela yonke izimoto zakho nenkampani efanayo yomshuwalense; umshuwalense yonke impilo yomndeni kanye izinhlelo zezokwelapha okufanayo yomshuwalense ngokuqinile; Umshuwalense yonke imizi nempahla izimpahla nenkampani efanayo yomshuwalense, futhi uzokwazi ukusindisa enkulu zonke lezi nomshuwalense.
v. Qinisekisa ekhaya lakho futhi izimoto: Ukufaka izici zokuphepha nezesimanje emakhaya yakho kanye nezimoto ukuze agweme noma ikuphi zivame sokugqekeza, phansi and ukweba. Security zobuchwepheshe like mlilo, Ukugqekezwa alamu, anti-lock izindawo nezinye izici lwezokuphepha babezobe kuncishiswe noma ukunciphisa izigameko izingozi emakhaya yakho kanye izimoto, futhi lokhu asisindise kakhulu imali kusukela umshwalense wakho wawubuyela sinciphise premium yakho rates.
Tags:5 Izindlela Sure Ukusindisa Big On Insurance Your, Save Big On Your Insurance
Home and Property Insurance: Quality and Policy Affordable for You